बानेश्वरमा कांग्रेस कार्यकर्ता र प्रहरी विच झडप - Gaule Media ::
Home/समाचार/बानेश्वरमा कांग्रेस कार्यकर्ता र प्रहरी विच झडप
बानेश्वरमा कांग्रेस कार्यकर्ता र प्रहरी विच झडप
Gaule Media५ श्रावण २०७५, शनिबार १४:००
सरकारवि?द्ध सडकमा उत्रिएको प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भएको छ । नयाँबानेश्वरमा झडपका क्रममा दुई डीएसपीसहित ११ प्रहरी र त?ण दलका अध्यक्ष जीतजंगबस्नेत सहित तीन दर्जन बढी प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन । कांग्रेसले त?ण दलको आहृवानमा प्रदर्शन गरेको हो । प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे लगायतका सहभागीता रहेको थियो । माइतीघर मण्डलाबाट सु? भएको प्रदर्शन विजुलीबजार पुलमा आएपछि मुल सडकमा प्रवेश गरेको थियो ।
प्रहरीले रोक्न खोजेपछि बानेश्वरमा तनाव बड । बानेको थियो । डा। गोविन्द केसीका समर्थकह?को सभा चलिरहेको थियो भने अर्कोतिर कांग्रेसले निषेधाज्ञा तोड्न खोज्यो । प्रहरीले अश्रुग्यास हान्दा डा। केसीका समर्थकह?को सभामा सहभागीह? समेत प्रभावित भएका थिए ।
कांग्रेसका कार्यकर्ताले ढुंगा हान्न थालेपछि झडप भयो । प्रहरीले अश्रुग्यासका साथै लाठी हानेको थियो भने प्रर्दशनकारीले ढुंङगा प्रहार गरेका थिए । यसले नयाँवानेश्वर क्षेत्र तनाबग्रस्त बन्यो ।त?ण दलका कार्यकर्ताले ढुंगामुढा गरेपछि प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई बुद्धनगर र बबरमहलसम्म लेखेटेको थियो ।
लेखनाथ जेसिजमा नयाँ नेतृत्व अध्यक्षमा न्यौपाने
५ मंसिर २०७८, आईतवार १९:११
कोरोनाबाट संक्रमणबाट भारतमा मृत्यु हुनेको सख्या ११ पुग्यो
१२ चैत्र २०७६, बुधबार ०४:५३
१२ जेष्ठ २०७५, शनिबार १७:०२